Ziyigugu kubalaleli izilimi zomdabu | IOL Isolezwe
Ziyigugu kubalaleli izilimi zomdabu
Isolezwe / 12 June 2012, 12:14pm /
U-K-Ci August womhlobo wenene FM
ZIBUKEKA zinamandla izilimi zomdabu emisakazweni yakuleli, ngike ngalalela imisakazo esebenzisa izilimi zabomdabu naleyo esebenzisa isilungu.
Engikutholile wukuthi abantu abaningi bayaziqhenya ngezilimi zabo nokwenza isibalo sihlale siphezulu emisakazweni esakaza ngezilimi zomdabu.
Okugqamayo kulezi ziteshi wukuthi iningi labantu kalithandi ukuthi izilimi zabo zixutshwe nezinye.
U-K-Ci August osakaza uhlelo lwantambama kuMhlobo Wenene FM uzakhele olukhulu udumo ngendlela alukhuluma kahle ngayo ulimi lwesiXhosa.
Into aphinde adlise ngayo lo msakazi wukuthi akanawo umculo noma iculo agijima phezu kwalo uma esakaza. Lokhu kwenza uluzwe kahle ulimi lwesiXhosa ukuthi lumnandi kanjani njengoba engalushebi nolunye ulimi.
Ophenyweni engilwenzile ngithole ukuthi lo msakazo ubalwa kwenabalaleli abaningi.
Kwenzeka okufanayo uma ngilalele uPutco Mafani ekuseni oze ancome athi cha lumnandi ulimi lwakaXhosa.
Omunye umsakazi woMhlobo Wenene, uLuzuko Koti wazama wehluleka ethi usakaza ngesiLungu kulo msakazo kwavele kwacaca ukuthi abalaleli abayizwa kahle indaba yokuxutshwa kwesiNgisi olimini lwabo.
UKhozi FM oluhamba phambili kuleli ngesibalo sabalaleli (7 million), ngesinye isiteshi engicabanga ukuthi sinabalandeli abangaka nje ngoba sisakaza ngesiZulu.
Okuhle ngolimi lomdabu wukuthi uzwa konke okushiwo ngumsakazi.
Ukusakaza ngolimi lomdabu ngibona kuba nanomthelela kwelokuthi isiteshi siwudidiyela kanjani umculo ozodlalwa kusona.
Imisakazo eminingi esakaza ngesilungu uyithola idlala umculo waphesheya uma uyiqhathanisa nale misakazo esebenzisa izilimi zabomdabu. Yona noma iwudlala umculo waphesheya kodwa igxila emculweni wakuleli nokuyenza isondelane nabalaleli bayo.
Omunye umsakazo oyisibonelo esihle Izwi LoMzansi nawo osakaza ngesiZulu kuphela. Okuhle wukuthi unabalaleli abaningi uma uwuqhathanisa neminye imisakazo yomphakathi efana noVibe FM, Nanda FM, Radio Sunny South neminye exuba izilimi.
Ngiyazi ukuthi imvume yeGagasi 99.5 FM iligunyaza ukuthi lisebenzise zombili izilimi okuyisiZulu nesiNgisi kodwa uyawucabanga nje lo msakazo ususebenzisa isiZulu kuphela ukuthi ungaba njani?
Mhlawumbe Ukhozi FM neZwi LoMzansi ngabe badonsa kanzima.
Thatha uhlelo luka-Alex Mthiyane ekuseni. Baningi abaluthandayo kodwa lushoda ngezinto ezincane. Uma lungase lugxile esiZulwini, luphume luphele ulimi lwesiNgisi ngisho noma ngabe babuza imibuzo, u-2 million wabalaleli aqhosha ngawo uLinda Sibiya ekuseni ungaphaza-miseka kakhulu.
Emculweni, uma bengase badlale izingoma eziningi zaseMzansi banciphise kwezaphesheya, uLinda angalukhomba uhlelo luka-Alex ngezibalo.
Ngisho noma uKhozi luziqhenya ngabalaleli abaningi kodwa mina angazi luncintisana nobani ngoba kunzima ukuthi umuntu waseKZN umuzwe ethi yena ulalela uMhlobo Wenene FM noma iLesedi FM iziteshi zomsakazo engicabanga ukuthi ziqhudelana okwangempela nalo msakazo.
Uma kungaba nomsakazo osebenzisa isiZulu kuphela kungaphuma izibalo zangempela zabantu abalalela uKhozi FM. Mhlawumbe kuzomele sivume ukuthi umsakazo oncintisana noKhozi FM okwangempela eKZN kungaba yiZwi LoMzansi FM. Cha abantu bayaluthanda ulimi lwabo.